10 सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना तपाईंको बच्चाहरू युरोपमा भ्रमण गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना तपाईंको बच्चाहरू युरोपमा भ्रमण गर्न
पढ्ने समय:7मिनेट(Last Updated On: 27/11/2020)
बच्चाहरूसँग यात्रा गर्दै युरोपका लागि चुनौती हुन सक्छ. त्यसैले, बच्चाहरूले रमाईलो गर्नुहुने केही गतिविधिहरू थपेमा यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, को एक को लागी 10 युरोपमा सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना. विश्वका केही उत्तम चिडियाखानाहरू युरोपमा छन्. को हृदय मा सर्वश्रेष्ठ शहरहरू यूरोपमा, त्यहाँ हरियो अभयारण्यहरू छन्, र 10 युरोप मा बच्चाहरु संग भेट गर्न सबै भन्दा उत्तम चिड़ियाघर.
रेल परिवहन यात्रा गर्न सबैभन्दा वातावरण मैत्री तरिका हो. यस लेखमा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको थियो र सुरक्षित एक ट्रेन द्वारा गरिएको थियो, विश्व मा सस्तो ट्रेन टिकटहरु.
1. भियनामा स्कोनब्रुन चिड़ियाघर
शोनब्रुन भियनाको चिडियाखाना, यसमा घर पनि छ 500 जनावरहरूको प्रजाति, देखि 1752. उदाहरण को रुपमा, युरोपको सब भन्दा पुरानो चिडियाखाना अफ्रिकी हात्ती र विशाल पांडाको घर छ. को 42 एकर भियनेस चिडियाखाना दरबारको भित्र अवस्थित छ र बच्चाहरू र अभिभावकहरूको लागि केहि आश्चर्यजनक आकर्षणहरू छन्.
उदाहरणका लागि, चिडियाखानामा वर्षावन घर गर्जनको साथ वास्तविक वर्षावनको भयानक मानव निर्मित प्रतिकृति हो।. एशियाई साना-नौंजा ओट्टर र भ्याम्पायर केकाहरूको लागि आँखा बाहिर राख्न तपाईं वरिपरि घुम्नुहुन्छ. साथै, ध्रुवीय भालु घर, बाघ र चीता, कोआला घर र अन्य धेरै राम्रा जनावरहरूका घरहरू तपाईंको लागि पर्खिरहेका छन्.
भियनाको शोनब्रुन चिडियाखानामा प्रवेश भियना पास संग निःशुल्क छ. तपाईं त्यहाँ भूमिगत भूमिगत U4 को साथ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ.
2. 10 यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना: ईन्सब्रकमा अल्पाइन चिडियाखाना
लुभावो मा अवस्थित टायरोल अष्ट्रिया मा, ईन्स्ब्रकमा अल्पाइन चिडियाखाना भन्दा बढि घर छ 150 पशु प्रजाति. You’ll find this amazing zoo at the foot of the Nordkette mountain range in the Austrian Alps. त्यसैले, यदि तपाईं आल्प्समा परिवार यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् अल्पेन्जु इन्सब्रकका लागि समय.
तपाइँका बच्चाहरू खैरो भालुबाट अचम्मित हुनेछन्, लिन्क्स, सुनौलो चील, औटर्स, र आगो सलामन्डर. यी केवल केही पशु प्रजातिहरू हुन् जुन तपाईं अल्पाइन चिडियाखानामा देख्नुहुनेछ. जबकि तपाइँका बच्चाहरूले जनावरहरूको प्रशंसा गरिरहेका छन्, तपाईं द्वारा हटाइनेछ आश्चर्यजनक दृश्य.
तपाईं यो अद्भुत चिडियाखानामा पुग्न सक्नुहुन्छ सार्वजनिक यातायात द्वारा, बाट शहर केन्द्र. यसबाहेक, त्यहाँ विभिन्न बजेट-अनुकूल चिडियाखाना पास विकल्पहरू छन्, त्यसोभए तपाईं सबै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ.
3. चेक गणराज्यको सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना: प्राग प्राणि उद्यान
प्राग आफ्नो तेजस्वी पुलहरूको लागि प्रसिद्ध छ, प्राकृतिक दृश्य, वास्तुकला, र पार्टीहरू. तथापि, धेरैलाई प्राग चिड़ियाघरको बारेमा थाहा छैन, र यो यो बच्चाहरूको साथ भ्रमण गर्न युरोपको सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना बीच सम्मानको ठाउँ हो.
.5. square वर्ग किलोमिटरले प्राग चिडियाखानालाई युरोपको सबैभन्दा ठूलो चिडियाघर बनाउँदछ, भन्दा बढी आवास 4000 जनावर. यसरी, त्यहाँ अभिवादन गर्न धेरै मंडपहरू र जनावरहरू छन्, उदाहरणका लागि, शांती एशियाई हात्ती, बिकिरा, मैत्री गोरिल्ला, र धेरै धेरै अनौंठो र सुन्दर जनावरहरू.
प्राग प्राणी उद्यान दैनिक खुला छ र बस वा ट्राम द्वारा पहुँचयोग्य छ. प्रागमा ठूलो पारिवारिक रमाईलोको लागि हाम्रो सुझाव प्राग चिडियाखानाको लागि पूर्ण परिवार दिन-यात्राको योजना बनाउनु हो किनभने तपाईंको बच्चाहरूले निश्चित रूपमा यो सबै खोजी गर्न चाहानुहुन्छ।.
4. 10 यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना: बर्लिन प्राणि उद्यान
The oldest zoo in Germany is home to some of the extraordinary animals in the world. The Chilean flamingo and African Penguin are justafew of the special residents you’ll meet on your family visit to the Berlin zoo. दुर्लभ र विदेशी जनावरहरूले बर्लिनलाई युरोपमा तपाईंको बच्चाहरूको साथ हेर्नका लागि एउटा उत्तम चिड़ियाघर बनाउँदछ.
बर्लिन प्राणीशास्त्र उद्यान मध्ये एकको मध्यमा अवस्थित छ युरोपका सब भन्दा रमाईलो शहरहरू, र चिडियाखाना कुनै अपवाद छैन. यदि तपाईं लामो सप्ताहन्तको लागि शहरमा हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले चिड़ियाघरमा एक दिनको लागि निश्चित रूपमा समय बनाउनु पर्छ, मंडपहरू, र एक्वेरियम.
यस चिडियाखानाको बारेमा सबै भन्दा राम्रो चीजहरू त्यहाँ छन् विशेष टिकट मूल्य साना वा ठूला परिवारका लागि, चिडियाखानामा एकल प्रविष्टि, वा एक्वेरियम प्रवेशको साथ कम्बो.
5. ह्याम्बर्गमा सब भन्दा राम्रो चिडियाखाना: हागेनबेक चिड़ियाघर
ह्याम्बर्ग एक महान छ शहर ब्रेक गन्तव्य, र बच्चाहरु संग भेट्न एक रमाईलो शहर. ह्याम्बर्गको हेगेनबेक टियरपार्क बच्चाहरूको साथ ह्याम्बर्गमा गर्नुपर्ने रमाईलो चीजहरूको एउटा उदाहरण हो।. यो युरोप र जर्मनीको चिडियाखाना मध्ये एउटा हो. भन्दा बढि खुला खुला घर 1,800 जनावर, यो शानदार चिडियाखानामा आर्कटिक महासागर छ. आर्कटिक महासागर त्यहाँ छ जहाँ तपाईं एक पारिवारिक साहसिक कार्य शुरू गर्नुहुन्छ, र ध्रुवीय भालुको भ्रमण गर्नुहोस्, पेंगुइनहरू, र समुद्री भालु.
यदि तपाई हैम्बर्गमा केहि दिनका लागि हुनुहुन्छ, त्यसोभए तपाईले ह्याम्बर्ग कार्ड पाउनु पर्छ. यस तरिकाले तपाईं मा ठूलो छुटको मजा लिनुहुनेछ पर्यटक आकर्षण, र चिडियाखाना र चिडियाखानामा उष्णकटिबंधीय एक्वैरियममा छुट.
बर्लिनदेखि ह्याम्बर्ग ट्रेन मूल्यहरू
ब्रेमेनदेखि ह्याम्बर्ग ट्रेन मूल्यहरू
ह्यान्वरबाट हैम्बर्ग ट्रेन मूल्यहरू
कोलोन बाट ह्याम्बर्ग ट्रेनको मूल्य
6. बेल्जियममा एन्ट्वर्प चिडियाखाना
माथिबाट एउटा 10 युरोपमा सर्वश्रेष्ठ चिडियाखानाहरू एन्ट्वर्प चिडियाखाना हो. हाम्रो सूचीमा कुनै पनि आश्चर्यजनक चिडियाखाना जस्तै, एन्टवर्प चिडियाखानामा तपाईं संसारको सबैभन्दा सुन्दर जनावरहरूको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ. तथापि, अन्टवर्प चिडियाखानालाई अन्य चिड़ियाघरहरू भन्दा फरक पार्ने चीजहरू मध्ये एक, लोपोन्मुख पशुहरूका लागि विशेष कार्यक्रम हो, Bonobos र Okapi जस्तै.
बेल्जियममा सब भन्दा राम्रो चिडियाखाना बर्षको बखत ठूलो विस्तार भएको छ. चिडियाखाना यति धेरै बढेको छ कि यो शहरको बीचमा छैन, केन्द्रीय स्टेशन को धेरै निकट. यसबाहेक, चिडियाखानाको स्काईवाकले सबैभन्दा धेरै प्रकट गर्दछ लुभावो दृश्य दृश्य बगैंचा र एक को युरोपमा अफ-द पिट्ने-पथ शहरहरू.
7. लेस म्याथेसमा ला पाल्मीयर चिड़ियाघर, फ्रान्स
ला पाल्मीयरमा सुन्दर लेस म्याथ्स चिडियाखाना हरियो जंगल र टिब्बामा अवस्थित छ. त्यहाँ चिनो लगाइएको चिह्नहरू छन् जुन तपाईं र बच्चाहरूलाई जनावरको संसार र युरोपको सब भन्दा चिडियाखानामा प्रकृतिको आश्चर्यको वरिपरि यात्रा गर्नुहुन्छ।.
जंगली समुद्री सिंह र जंगली बिरालाहरू, Carreabean फ्लेमिंगो, र विशाल कछुए, तपाईंले भेट्नु हुने विशेष जनावरहरू हुन्. यो अद्भुत चिडियाखाना फ्रान्सको नयाँ अक्वीटाइन क्षेत्रमा अवस्थित छ, एट्लान्टिक तटमा,agreat adventure from पेरिस ट्रेन द्वारा.
8. एम्स्टर्डममा आर्टिस चिड़ियाघर
बस 15 शहरको केन्द्रबाट केही मिनेट, तपाईंले एम्स्टर्डममा पहिलो चिडियाखाना र यूरोपमा सब भन्दा राम्रो चिडियाखाना पाउनुहुनेछ. आर्टिस रोयल चिडियाखाना zebras को घर छ, पुतलीहरू, उष्णकटिबंधीय माछा, र सबैभन्दा सानो जीवहरू जुन तपाईंको बच्चालाई मोहित पार्दछ, मा ARTIS- माइक्रोपिया.
एक एम्स्टर्डम चिडियाखानामा भ्रमण एउटा राम्रो परिवार गतिविधि हो एम्स्टर्डममा गर्नका लागि. धेरै प्यावेलिनहरूको साथ, एक्वेरियममा, र पुराना ओक रूखहरू, एम्स्टर्डममा आर्टिस चिडियाखाना एक रमणीय र एक हो नेदरल्याण्डमा जब भ्रमण गर्न विशेष ठाउँहरू.
एम्स्टर्डम रोयल चिड़ियाघरले प्रस्ताव गरेको सबै चीजको आनन्द लिन तपाईं आर्टिस चिड़ियाघर र माइक्रोपिया टिकटको राम्रो खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।.
9. इ England्ल्याण्डका सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना: चेस्टर चिड़ियाघर
इ England्ल्यान्डको सब भन्दा ठूलो चिडियाखाना स्थित छ चेशाइर र भन्दा बढि घर छ 35,000 जनावर. चेस्टर चिडियाखाना तपाईका बच्चाहरूसँग भ्रमण गर्न युरोपमा सब भन्दा राम्रो चिडियाखाना हो किनकि त्यहाँ अन्वेषण गर्न धेरै जनावर र बगैंचा छन्।. संसारभरिबाट जनावरहरू छन्, लेमर जस्तै, महान हर्नबिल, हर्नबिल, र धेरै धेरै अनौंठो जनावरहरू.
पनि, यदि तपाइँसँग तपाइँको परिवार बाहिर जाने समय छ, चिडियाखानामा मनमोहक बगैंचा भ्रमण गर्न निश्चित हुनुहोस्. चेस्टर चिडियाखानामा फूल संग्रहको विश्व प्रसिद्ध नाम छ, र अर्किड बिल्कुल अपवाद हो. चेस्टर चिडियाखानाको भ्रमण उत्तम पारिवारिक बाहिरी गतिविधि हो.
10. यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना: स्विट्जरल्याण्डमा बासेल चिडियाखाना
स्विजरल्याण्डको सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना बासेलको मुटुमा अवस्थित छ. बासल चिडियाखाना संसारभरिबाट जनावरहरूको घर छ, र तपाई प्रत्येक पशुलाई यसको प्राकृतिक निवासीमा बिभिन्न घेराहरुमा भेट्टाउनुहुनेछ.
अर्को अचम्मको कुरा जुन बासेल चिडियाखाना हाम्रो मा राख्छ 10 युरोपमा सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना, बच्चाहरूको चिड़ियाघर हो. यहाँ तपाइँका बच्चाहरु को लागी एक बिच अमूल्य अवसर को लागी संसार भर बाट घरेलू पशुहरु को लागी प्राप्त हुनेछ, घरपालुवा जनावर, र तिनीहरूलाई खुवाउनुहोस्.
चिडियाखानाको भ्रमण सम्पूर्ण परिवारका लागि अद्भुत बाहिरी गतिविधि हो. हरियो बगैंचा र वन, असाधारण जनावर र बोटबिरुवा, बच्चाहरूलाई आकर्षित र मनोरन्जन गर्दछ. को 10 युरोपमा सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना तपाईंको बच्चाहरूको साथ भ्रमण गर्न, यूरोप लुकेका रत्नहरू हुन्, र कम्तिमा पूरा दिन यात्राको लागि लायक छन्.
म्युनिक बाटेल ट्रेन मूल्यहरु
बेर्न ट्रेन मूल्यहरू बर्न
जेनेभा बसेल ट्रेन मूल्यहरू
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी रेलमार्फत युरोपमा सब भन्दा उत्तम चिड़ियाघरहरूमा अचम्मको यात्राको योजना बनाउन सहयोग गर्न हामी खुशी हुनेछौं.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट एम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "१० युरोपमा तपाइँका बच्चाहरु संग भेट गर्नको लागि १० सर्वश्रेष्ठ चिडियाखाना" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-zoos-visit-kids-europe%2F اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
adventure BestzoosEurope EuropeTraveling Europewithkids पारिवारिक बिदा बच्चाहरु रेल यात्रा Travelingwithkids zoo